Egwuregwu agha 5 kacha mma maka gam akporo | Androidsis
Otu n'ime ụdị na ụdị kachasị ewu ewu, ọ bụghị naanị na gam akporo, mana na nyiwe egwuregwu niile, ma ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka nwere sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, consoles desktọpụ, kọmpụta na consoles mkpanaka, bụ agha. Ma ọ bụ na egwuregwu agha bụkwa otu n'ime ngalaba ndị nwere aha kachasị, ya mere ha nwere obodo buru ibu ma na-arụsi ọrụ ike, ọ bụ ya mere anyị ji depụta ụfọdụ egwuregwu kachasị mma nke ụdị a maka gam akporo.
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ndepụta nke egwuregwu 5 kacha mma maka gam akporo. Ndị niile anyị depụtara ebe a dị na Google Play Store ma bụrụkwa n'efu. N'aka nke ha, ha bụ otu aha kacha ebudatara na ụlọ ahịa yana ndị nwere ogo kacha mma.
N'okpuru, ị ga-ahụ usoro egwuregwu kacha mma maka gam akporo smartphones. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nke a chịkọtara post bụ n'efu. Ya mere, ị gaghị akpa ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile.
1 Legit Shadowgun
2 Brothers na ogwe aka 3
3 Ndị dike World War: War Fps
5 Kpọọ Mobile Mobile
Iji nweta nchịkọta a ka ọ bụrụ mmalite dị mma, anyị nwere Shadowngun Legends, otu n'ime agha na agbapụ egwuregwu na gam akporo, na n'ihi ihe dị iche iche. Otu n'ime ha bụ na aha a nwere eserese dị ịtụnanya n'ezie ma rụọ ọrụ nke ọma, yana ụda ụda immersive, ihe nkiri na mmetụta mara mma nke na-eme ka ahụmahụ agha ahụ na-atọ ụtọ mgbe niile.
N'ebe a, ị ga-echerịrị ọtụtụ narị ndị ọbịa ihu. Gbuo ha, ekwela ka ha merie unu. Ị nwere ọtụtụ ngwa ọgụ, teknụzụ niile dị elu na nke na-emebi emebi, iji merie ha. Ha na-ebuso agha n'enweghị ebere; kwụsị mbuso agha ma merie agha galactic na ụwa ebe nlanarị dị mkpa.
Daalụ maka usoro nkwado na ọtụtụ ọkpụkpọ, ị nwere ike soro ndị enyi gị gwuo egwu ma gbochie ndị ọbịa ịwakpo ụwa. Agha ahụ amalitela, naanị gị na ndị otu gị nwere ike imebi atụmatụ ya. Gafee ọtụtụ narị ozi na mbara ala 3 dị iche iche iji zọpụta ụmụ mmadụ site na njide nke ndị ọbịa na agha ha malitere ibibi mmadụ niile.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsịtụ agha ahụ, ị ​​nwere ike soro ndị enyi gị gwuo egwu na 1 vs 1 ma ọ bụ 4 vs 4 ma nwee obi ụtọ n'oge ogologo egwuregwu. N'aka nke ya, na Shadowgun Legends, ọ bụghị nanị na ị ga-alụso ndị agha ala ọzọ ọgụ, kamakwa ndị isi ha, bụ ndị na-atụ egwu. Ọ dabara nke ọma, e nwere repertoire nwere ihe karịrị narị ngwa ọgụ 700 iti ha; Ekwela ka ha pụọ ​​na ya! Ị nwekwara ike ịnakọta ihe karịrị 1000 ngwa agha dị ka ọdịnihu ma kee onwe gị site n'isi ruo na mkpịsị ụkwụ dịka ịchọrọ.
Brothers na ogwe aka 3
Ụmụnna nọ na Arms 3 bụ egwuregwu agha kachasị mma maka gam akporo na ndepụta a, yana Eserese dị elu, ihe ngosi na mmetụta maka ahụmịhe egwuregwu na-enweghị atụ. Dabere na Agha Secondwa nke Abụọ, n'ọgbọ egwuregwu dị na egwuregwu a bụ nke kacha bụrụ nke na -agba ọbara, ebe ha jupụtara na ndị iro yana enwere mgbọ na mgbọ ebe niile. Ọrụ gị bụ imeri mmeri wee merie agha.
Bụrụ Sergeant Wright na egwuregwu ọtụtụ egwuregwu a wee bilie n'ọkwa. N'ebe a, ị nwere ụdị egwuregwu abụọ, nke bụ All Against All na Team Deathmatch. Ị nwekwara 4 dị iche iche map, nke bụ ebe agha na-ewere ọnọdụ. Enwere ụdị ọgụ dị iche iche ị nwere ike iji, dịka ikuku ikuku, molotov, ogbunigwe mgbawa na ọkụ ngwa agha, n'etiti ndị ọzọ. Ị nwekwara ike nweta ọtụtụ ndị enyi ọhụrụ na ndị agha, ma mee ka ha dịkwuo mma iji merie agha ahụ. Ihe ọzọ bụ na enwere ọtụtụ ngwa ọgụ ịhọrọ, yana ọrụ na mmezu ịrụ.
Inmụnna na ogwe aka ™ 3
Ndị dike World War: War Fps
N'ịga n'ihu ikwu banyere egwuregwu agha nke atọ maka gam akporo, anyị na-eche ihu Ndị dike World War: War Fps, aha nwere ihe karịrị nde 50 nbudata na Play Store nke nwere ọkwa nke kpakpando 4.5 na ụlọ ahịa ahụ, ọ bụghịkwa n'efu. Egwuregwu a bụ ọtụtụ egwuregwu nke ị nwere ike igwu megide ndị egwuregwu ndị ọzọ si n'akụkụ ụwa niile n'ọgụ ịntanetị.
Eserese ya, mmetụta ya na ụda ya dị ịtụnanya ma bụrụ ihe ezi uche dị na ya, na-eme ka ahụmịhe agha yiri nke egwuregwu njikwa. Agha a na-ewere ọnọdụ n'ọtụtụ obodo. Ị nwere ụdị ngwa ọgụ dị iche iche, nke bụ nke United States, Germany, Japan na Soviet Union mbụ. Enwekwara ụdị ngwa ọgụ 57 dị iche iche, gụnyere egbe, egbe egbe, mwakpo na egbe mgbọ egbe, na ndị ọzọ. Na mgbakwunye, enwere ọtụtụ ụdị egwuregwu na egwuregwu ị nwere ike hazie ka ọ masịrị gị.
PUBG Mobile bụ egwuregwu agha ọzọ nwere eserese dị ịtụnanya na maapụ agha dị iche iche nke enwere ndị egwuregwu 100 nọ n'ụgbọelu na-ebuli onwe ha n'ọgbọ agha wee lụọ ọgụ ka ha bụrụ onye ikpeazụ ga-anwụ. Enwere ike ịkpọ ya n'otu n'otu, duo ma ọ bụ squad, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na otu ahụ ezughị ezu, a pụkwara ịkpọ ya na otu atọ. Ọ bụ ọtụtụ, yabụ ị chọrọ njikọ ịntanetị yana enwere ezigbo ndị egwuregwu.
O nwekwara ụdịdị dị iche iche na isiokwu na-emelite oge ọ bụla. Ọ nwekwara usoro ọkwa na ọnụ ọgụgụ ma na-enye ọtụtụ narị ụgwọ ọrụ.
Kpọọ Mobile Mobile
Agha royale ọzọ nke PUBG Mobile bụ oku nke ọrụ Mobile. Egwuregwu a nwere otu usoro egwuregwu, yabụ gị ma ọ bụ ndị otu gị ga-abụ ndị lanarịrị ikpeazụ iji merie egwuregwu na agha ndị otu ndị ọzọ gosipụtara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu egwuregwu 5 kacha mma maka gam akporo